Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်း)
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။ 07/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
မျက်စိရဲ့ မျက်ရည်ထုတ်တဲ့စနစ်ဟာ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေ၊ လုံးဝဖြစ်စေ ပိတ်သွားရင် မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ မျက်ရည်မစီးထွက်နိုင်ရင် မျက်ဝတ်ထွက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်းဖြစ်ပြီး မျက်စိမှာ ရောဂါပိုးဝင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်းဟာ ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ကုသမှုဟာ ပိတ်ဆို့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့ ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်ပါတယ်။
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မွေးကင်းစတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာတော့ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်း၊ အကျိတ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်တွေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ နှာခေါင်းနဲ့မျက်ရည်လမ်းကြောင်းဆုံရအိတ်အတွင်း ပိတ်မိရင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်ပွားပြီး အောက်ပါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
မျက်လုံးအတွင်းပိုင်း၊ မျက်လုံးနဲ့ နှာခေါင်းတဝိုက် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ နီရဲခြင်း
မျက်စိပိုးဝင်ခြင်းဟာ ဆက်တိုက် (သို့) မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေခြင်း
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မွေးရာပါပိတ်ဆို့ခြင်း။ မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ မျက်ရည်လမ်းကြောင်း မပွင့်လို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်အလိုက် ပြောင်းလဲခြင်း။ သက်ကြီးပိုင်းတွေမှာ မျက်ရည်ပြွန် ကျဉ်းသွားရာကနေ ပိတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ပိုးဝင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း။ နာတာရှည် ပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ မျက်စိရဲ့ မျက်ရည်စီးဆင်းမှုစနစ်ကို ပိတ်ဆို့စေပါတယ်။ နာတာရှည် ထိပ်ကပ်နာဖြစ်ရင်လည်း တစ်သျှူးတွေ အမာရွတ်ဖြစ်ရာကနေ ပိတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း။ နှာခေါင်းကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အကျိတ်။ မျက်ရည်ပြွန်စနစ်ပေါ် သွားဖိမိရင် ပိတ်နိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်း၊ ဓါတ်ရောင်ခြည် ကုသခြင်း။ ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေမှာ ဆေးကုသရာကနေ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အသက်အရွယ်၊ ကျယး/မ။ အသက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
မျက်လုံး၊ မျက်ခွံ၊ နှာခေါင်း စသည်တို့ ခွဲစိတ်ဖူးခြင်း
မျက်စိရေတိမ်အတွက် ဆေးဝါးများ သုံးစွဲနေခြင်း
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဒီရောဂါရှိတယ်လို့ သံသယရှိရင် လက္ခဏာတွေရှိမရှိ မေးမြန်းခြင်း၊ မျက်စိစမ်းသပ်ခြင်း၊ တခြားဖြစ်နိုင်ခြေများ စစ်ဆေးခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်းကို သိနိုင်ဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေနဲ့ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
မျက်ရည်စီးဆင်းမှုစစ်ဆေးခြင်း။ သင့်မျက်ရည်တွေ ဘယ်လောက်မြန်မြန်စီးသလဲ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
ဆေးရည်ထည့်ခြင်း။ ဆလိုင်းဆေးရည်ကို မျက်ရည်စီးဆင်းတဲ့စနစ်ထဲ ထည့်သွင်းပြီး ကောင်းကောင်း စီးမစီး စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
ဓါတ်မှန်၊ စီတီ စတာတွေနဲ့ မျက်လုံးကို ပုံရိပ်ဖာ်စစ်ဆေးခြင်း။ ပိတ်ဆို့တဲ့နေရာနဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သိနိုင်ပါတယ်။
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုဟာ မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းပေါ် မူတည်ပါတယ်။ တခါတရံ တခုထက်ပိုတဲ့ ကုသမှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ပါကုသမှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ပဋိဇီဝဆေးများ။ ရောဂါပိုးဝင်တယ်လို့ သံသယရှိရင် ပဋိဇီဝမျက်စဉ်းတွေ၊ သောက်ဆေးတွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။
မျက်ရည်ပြွန်လမ်းကြောင်းကို နှိပ်နယ်ခြင်း။ ကလေးတွေရဲ့ မျက်ရည်ပြွန်ကို ပွင့်စေဖို့ ဘယ်လိုနှိပ်နယ်ရမယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်က ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ အဓိကကတော့ နှာခေါင်းအပေါ်ပိုင်းတလျှောက်ကို ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး မျက်ရည်လမ်းကြောင်းပိတ်ခဲ့ရင် ဒဏ်ရာသက်သာဖို့ လအနည်းငယ် စောင့်ရပါမယ်။
မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ သူ့အလိုလို မပွင့်ရင်၊ လူကြီးတွေမှာ တစိတ်တပိုင်း ပိတ်ရင် ဆေးရည်ထိုးသွင်းပြီး ပွင့်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘောလုံးပြွန်ဖြင့်ချဲ့ခြင်း။ တခြားနည်းတွေနဲ့ အဆင်မပြေရင် ဒီနည်းလမ်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေ၊ တစိတ်တပိုင်း ပိတ်နေတဲ့ လူကြီးတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
Stent ပြွန်ထည့်ခြင်း။ မေ့ဆေးပေးပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်းအတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
လက်ကို မကြာခဏ သေချာစွာ ဆေးကြောပါ။
ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့တွေဟာ တခြားကျန်းမာရေး ပြသနာတွေအပင် ကလေးရဲ့ မျက်ရည်စီးတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပိတ်စေနိုင်လို့ ကလေးတွေနားမှာ ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။
Reference: Accessed December 31, 2016
Blocked tear duct. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/blocked-tear-duct/home/ovc-20183590 Accessed December 31, 2016
Blocked tear duct. https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-blocked-tear-duct Accessed December 31, 2016
At-Home Treatments for Blocked Tear Ducts in Babies. http://www.healthline.com/health/parenting/baby-blocked-tear-duct#2 Accessed December 31, 2016